Warar - Ku beddel “shaandhada shaandheeyaha” sifaynta biyaha ee gurigaaga. Xusuusnow inaad soo noqoto oo aad cabto "biyo nadiif ah"!
Hadda xaaladaha nololeed ee dadku way soo fiicnaanayaan oo way sii fiicnaanayaan, waxayna bilaabeen inay ku daba galaan tayada nolosha. Iyadoo aan loo eegin inaad wax cunayso, cabto ama aad isticmaaleyso nolosha, waxaad u baahan tahay inaad caafimaad qabtid, haddii loo baahdana, waxaad isticmaali doontaa mashiinno qaar ah oo kaa caawiya, si aad u hubiso in waxyaabaha maalinlaha ah ee loo baahan yahay ay yihiin kuwo ammaan ah oo caafimaad qaba.
Biyuhu waa shay lagama maarmaan u ah nolosheena, haddana dad aad u badan ayaa bilaabay inay fiiro gaar ah u yeeshaan badbaadada isticmaalka biyaha. Guud ahaan, biyaha guryaheena waxaa ku daabula dhirta biyuhu tuubooyin. Biyaha noocan ah waa la jeermiyaa oo la nadiifiyaa, laakiin qaar ka mid ah gaasaska ama walxaha nadiifiya ayaa ku sii jiraya biyaha, waxaana jira miridh ku dhaca dhuumaha biyaha. Daadinta, oo sidaas ayeey nolosheena ugu gali doontaa dhuumaha iyo socodka biyaha.
Sidoo kale waa sababahan awgood in qoysas badani ay hadda rakibayaan biyo sifeeyeyaal si ay uga caawiyaan nadiifinta kheyraadka biyaha. Sababtoo ah sifaynta biyaha waxay ka kooban tahay shaandho miiraha, waxay qaadan kartaa inta badan nijaasta iyo bakteeriyada ku jirta biyaha tuubada, si kheyraadka biyaha ee ay ku daaweeyaan miiraha biyaha ay u ahaadaan kuwo amni iyo nadiifba u ah cabitaanka ama karinta. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah walxaha shaandhada waxaa loo isticmaalaa sifeynta, walxaha miiraha sidoo kale waxay u baahan yihiin in la beddelo. Immisa jeer ayey tahay in la beddelo?
Maalmahan, noocyada biyaha lagu nadiifiyo ee suuqa ku jira way kala duwan yihiin, iyo isticmaalka dabiiciga ah ee walxaha shaandhada sidoo kale waa ka duwan yahay, qiimaha nooc kasta oo beddelaadda shaandhada ahna sidoo kale aad ayuu u kala duwan yahay. Huahua maanta waxay kuu sheegaysaa inta jeer ee la beddelo saddexda nooc ee walxaha miiraha ee suuqa yaalla. caafimaadka!
1. Shaandhada kaarboonka shaqeynaya
Dhammaanteen waan ognahay in kaarboon firfircoon ay tahay walax leh xayeysiin xoog leh, sidaa darteed soo saarayaal badan oo biyo sifeeyeyaal ah ayaa u isticmaala inay yihiin maaddada ugu weyn ee miiraha miiraha biyaha. Guud ahaan, marka kaarboon firfircoon loo isticmaalo cunsur shaandho ah, waa in loo qaybiyaa kaarboon horay loo hawlgeliyey iyo kaarboon firfircoon kadib, sidaa darteed labada heer ayaa loo wada isticmaali karaa si ay u soo nuugaan ur badan iyo koloriin kheyraadka biyaha. Si kastaba ha noqotee, kaarboon firfircoon ayaa sidoo kale la buuxin doonaa ka dib isticmaalka muddada-dheer, waxayna badanaa u baahan tahay in la beddelo lixdii biloodba illaa hal sano.
Cufka suufka 'PP' waa nooc ka mid ah shaandheeya waxyaalaha waaweyn ee biyaha ku jira, sida nooca ceelasha iyo wasakhda birta ah ee ay ku tiirsan tahay inay ku xirto albaabka albaabkiisa. Waxay u dhigantaa faashad, lagu duudduubay tuubbada si ay uga caawiso kala-soocidda qashinka, maxaa yeelay waxyaalaha ay miiraayaan way badan yihiin, sidaa darteed nolosha adeeggu way ka gaabin doontaa biyaha soo galaya, qiyaastii 4 bilood ayaa lagu fulinayaa Beddel.
3. Xuubka Ultrafiltration
Markaad maqasho magaca xuubka ultrafiltration, waa inaad ogaataa in mugga waxa ay miiraysaa guud ahaan ay yar yihiin. Ka dib marka la sifeeyo ka dib, biyaha tuubada ayaa gebi ahaanba loo beddeli karaa biyo saafi ah. Tayada shaandhaynta oo hooseysa awgood, waqtiga beddelaaddu si dabiici ah wuu u dheeraanayaa, guud ahaan keliya hal mar 2dii sanaba mar.
Markii biyaha la sifeeyo la isticmaalo, waxa ugu muhiimsan waa in la tiriyo curiyaha miiraha, sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan beddelno oo aan nadiifinno waqtigeeda, si loo hubiyo inaan mar walba u cabbi karno biyo nadiif ah!